April 2, 2019 admin Wararka Caalamka 0
Guriga la siiyey qoyska Khaashuqji wuxuu ku yaallaa magaaladda dekedda ee Jidda waxuuna gurigaasi qiimahiisu uu ku kacayaa $4 milyan oo doolar” sida uu qoray wargeyska washingtob post.
“Saalax oo ah curadka ilmaha uu dhalay Jamaal Khaashuqji, ayaa qorsheeynayey inuu ku sii noolaado dalka Sacuudi Carabiya, halka carruurta kale ay ku nool yihiin Mareykanka iyada oo la filayo Sacuudiga inuu carruurta kalana uu guriyo halka ay ku nool yihiin uu uga iibiyo” ayuu yiri wargeyska.
Guriga ubadka Khaashuqji la siiyey waxaa u dheer oo ay Boqortooyadu u diyaarisay $10,000 oo doolar qofkiba iney bishi siiso iyo lacago kale oo Malaayiin ah oo Sacuudiga u qorsheynayo inuu qoyskaasi caddaan uu ku siiyo” sida ay sheegeyso warbixinta wargeyska lagu qoray.
Sacuudiga oo aan si cad u qeexin Khaashuuqji dilkiisa haddana waxay marki dambe qirteen iney koox ay ku sheegeen ‘damiir laawayaal’ oo 15 ka kooban inay dilkiisa ka dambeeyeen.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo casho sharaf hoygiisa ugu sameeyay Madaxwaynaha Jubaland April 3, 2019